Tine ruzivo rwakakwana mune isina kuoma extrusion granulation yekugadzira mutsara. Isu hatisi chete kutarisa pane ese maitiro maitiro mune yekugadzira maitiro, asi zvakare gara uchinzwisisa maitiro enzira yega yega yekugadzira tambo uye mushe mushe kuwana interlinking. Iyo yakazara yekugadzira maitiro ndeimwe yemabhenefiti makuru ekushandira pamwe kwako neYizheng Heavy Industries. Isu tinopa akagadziriswa ekugadzira mitsara mhinduro zvinoenderana nezvinodiwa chaizvo nevatengi.
Hapana kuomesa extrusion granulation yekugadzira tambo inogona kuburitsa yakakwira, yepakati uye yakaderera yevasungwa mukomputa fetiraiza yezvirimwa zvakasiyana. Iyo yekugadzira tambo haidi kuti iome, iine diki yekudyara uye yakaderera simba rekushandisa
Compound fetiraiza ine hunhu hweyunifomu granulation, yakajeka ruvara, yakatsiga mhando, uye nyore kuparara kuti ifurwe nezvirimwa. Kunyanya, zvine njodzi kuti mbeu dzisimudze fetereza. Inokodzera marudzi ese evhu uye gorosi, chibage, vise uye michero, nzungu, miriwo, bhinzi, maruva, miti yemichero nezvimwe zvirimwa. Iyo yakakodzera kune yepasi fetiraiza, fetiraiza, fetiraiza kudzingirira, fetiraiza uye kudiridza.
Mbishi zvigadzirwa zvekugadzira fetereza kugadzirwa zvinosanganisira urea, ammonium chloride, ammonium sulfate, liquid ammonia, ammonium monophosphate, diammonium phosphate, potasium chloride, potasium sulphate, kusanganisira mamwe mavhu uye mamwe mafirita. Zvinhu zvakasiyana-siyana zvehupenyu zvinowedzerwa zvinoenderana nezvinodiwa nevhu:
Isu tinopa yakakwana seti isina kuoma extrusion granulation yekugadzira mitsara iyo isingade kuomeswa. Iyo yekugadzira tambo michina inonyanya kusanganisira chisanganiso, diski feeder, roller extrusion granulation muchina, roller roller sieve muchina, bhandi conveyor, otomatiki ekuputira muchina uye zvimwe zvekubatsira michina.
Seunyanzvi hwekugadzira fetereza yekugadzira tambo michina, isu tinopa vatengi zvigadzirwa zvekugadzira uye mhinduro yakakodzera kwazvo kune akasiyana magadzirirwo emagetsi anodikanwa senge matani zviuru gumi pagore kusvika kumatoni mazana maviri ezviuru pagore.
Hapana kuomesa extrusion granulation yekugadzira mutsara inosanganisira otomatiki batcher, bhandi conveyor, kaviri-axis blender, disc feeder, extrusion granulation muchina, roller roller yekuongorora muchina, yakapera imba yekuchengetera, otomatiki ekuputira muchina, nezvimwe.
2. Kaviri Shaft Fertilizer Chisanganiso
3. Rongedza Kuwedzera Granulator
5.Magetsi Ehuwandu Kupakata Muchina